Gini mere ezigbo ahia ahia ji buru ihe di nkpa na COVID Era | Martech Zone
Ekwenyela na Super Bowl kwa afọ nke United States chọrọ elu nke 11 nde kilowatt-awa nke ike na-agba ọsọ egwuregwu na-amalite ịrụcha. Ochicha nri nke Oreo na-eche ihe dika otutu afo abuo maka oge obughi oge nile nke ike 11 nde kilowatt ga-aga nke oma ma o nweghi igba ochichi; naanị n’oge maka akara iji mezuo ihe ha zụtara.
Na ihu ọma maka ụlọ ọrụ kuki, afọ ndị gara aga na Super Bowl XLVII, e mechara nwee nrụrụ ike nke na-akpata nkwụsị ike na ámá egwuregwu ahụ. Oreo pịrị zipụ na njikere ha tweet cherekwa njikọ aka ahụ.
Hapụ? Nsogbu adịghị. pic.twitter.com/dnQ7pOgC
- OREO Kuki (@Oreo) February 4, 2013
Ka ọ na-erule ngwụsị nke abalị Sọnde, akaụntụ Twitter nke Oreo nakweere ihe ruru ndị na-eso 8,000 ma weghachite ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 15,000, akaụntụ Instagram ha si na ndị na-eso ụzọ 2,200 gaa 36,000, ma nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20,000 mmasị na Facebook. Na ngwụcha, atụmatụ Oreo bụ ihe ịga nke ọma ma gosipụta ụzọ dị ịtụnanya maka ịzụ ahịa oge.
Ahịa n'oge COVID-19
Enwere ụzọ dị iche iche azụmaahịa nwere ike isi kwalite na ire ngwaahịa na ọrụ ha, otu ụzọ ekwesiri ịtụle bụ azụmaahịa oge, ọkachasị n'ihi na ọ bụ usoro aghụghọ maka etu ndị ahịa ga-esi meghachi omume na Coronavirus.
Site na ihe atụ dị n'elu ma na-eweta nkọwa miri emi, ịre ahịa oge ọ bụla bụ ihe ụlọ ọrụ na-aza ngwa ngwa na mmemme dị ugbu a ma ọ bụ site na nkwupụta, okwu, ma ọ bụ omume na ebumnuche nke inweta visibiliti, okporo ụzọ, ma ọ bụ ahịa.
Akụkọ gosiri na ezigbo oge data bụ otu n'ime n'elu 3 ụzọ ndị ahịa kwuru ekwuola nke ọma ma tinye uru na atụmatụ ha. Ugbu a na COVID-19 dị na ndụ anyị maka ọdịnihu na-abịanụ, na-etinye azụmaahịa oge n'etiti ọgba aghara n'ime usoro azụmaahịa gị nwere ike melite mmekọrịta dị n'etiti akara gị na ndị na-eso ụzọ gị, yana bulie aha ụlọ ọrụ gị.
Kpọmkwem, nnukwu ụlọ ọrụ na-enweta uru nke ezigbo oge ahịa ọ kachasị n'ihi nnukwu ọnụnọ ha nwere na ụwa dijitalụ. Mgbe azụmahịa dị ka nke a wepụtara ozi na nzaghachi maka ihe omume ma ọ bụ nsogbu dị ugbu a, ndị na-ege ya ntị nwere ikike isoro ndị na-eso ụzọ nke ha kerịta ozi ahụ, n'ozuzu na-enyere ụlọ ọrụ ndị a aka ịgbatịkwuo iru ha karịa ka ọ dị ugbu a na ihe okike. omume.
Na nzaghachi na nke a, obere azụmaahịa kwesịrị ịmụta ịmịnye usoro aghụghọ ụlọ ọrụ ndị a, ma ọ bụ n'ụdị ikwu okwu na post ha ma ọ bụ weghachite ọdịnaya ha dị ka ụzọ iji dọta nnukwu ụlọ ọrụ ndị dị ugbu a na ntanetị gị.
Ndụmọdụ Azụmaahịa Oge
Ọ na-adịkarịrị ụlọ ọrụ buru ibu mfe ịmepụta ihe ịga nke ọma ezigbo oge ahia azum iji gbatịa iru ha na ndị na-ege ntị ugbu a, ebe obere azụmaahịa ga-achọ ụzọ dị iche iche iji nyere aka kwalite onwe ha. Tinyere ịmụ ihe na ịgbaso ụzọ ndị ụlọ ọrụ siri ike mebere, n'okpuru bụ ndụmọdụ ole na ole ị ga-atụle mgbe ị na-azụ atụmatụ azụmaahịa nke obere azụmaahịa gị:
Na Na Anya Lee - Otu nkeji ihe omume nwere ike ị na-aga n'ihu ma na-esote ọ na-agbadata ala. Lọ ọrụ gị ga-anọrịrị na nche dị elu ma ọ bụrụ na ọchọrọ ịme ahịa azụmaahịa nke ọma. Nke a nwere ike ịgụnye ịtọ ntọala Google ma ọ bụ nyiwe mkpuchi akụkọ ndị ọzọ gbasara isiokwu gị nwere ike ịchọ ikpuchi. Nke a ga - enyere akara aka gị aka izizi ozi banyere ọnọdụ na ihe ọhụrụ. Methodzọ ọzọ ga - eso ndị na - eme ihe ike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nọ n'ọhịa gị nke ga - ekpuchi otu isiokwu dịka azụmahịa gị. Y’oburu n’inweghi ike ijide ozi ohuru, odi n’onye mmadu na-eso; ma ị ka ga-enwe ohere iji ngwa ahịa azụmaahịa gị ọsọ ọsọ.
Nwee akụrụngwa - companylọ ọrụ gị nke nwere akụrụngwa akwadoro mara ihe mgbe ị na-ere ahịa n'oge COVID-19. O nwere ike isiri gị ike na omume ndị ahịa na-agbanwe mgbe niile na nzaghachi maka nsogbu ndị a, mana ịnwe ọdịnaya dị njikere ịga ga-enyere aka mezuo usoro ịzụ ahịa gị oge, dị ka Oreo gosipụtara na mbụ.
-arụ - Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị kpebiri isonye na azụmaahịa oge, ị ga-adịkwa njikere iso ndị na-ege gị ntị nwee ike ịzaghachi ma meghachi omume na ọdịnaya gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ na azụmahịa gị kpebie imepụta post banyere etu o si na-ejikwa oria a na-efe ugbu a yana nchedo nchekwa, ị kwesịrị ịdị njikere ịza ajụjụ ndị na-azụ ahịa gbasara nkwupụta gị n'ihi na nke a ga-eme ntụkwasị obi n'etiti akara gị na ndị ahịa gị.
Get Creative - Agbanyeghị COVID-19 na-emetụta eCommerce mgbe ọ malitere, ọ bụ ugbu a oge maka azụmaahịa iji mepụta ihe ma chepụta atụmatụ ọhụrụ dịka nkesa ọdịnaya vidiyo iji dọta ndị na-azụ ahịa. Ndị ụlọ ọrụ ugbu a nwere ohere igosipụta omume ha ma rute ndị na-azụ ahịa n’ọkwa miri emi. Ma ọ bụ site na ọchị ọchị ma ọ bụ na-egosipụta nsogbu, ịmepụta olu maka akara gị nwere ike ijikọ onwe gị na ndị na-ege gị ntị.
Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịtụle ndụmọdụ ndị a mgbe ha na-eme atụmatụ azụmaahịa ha. Ha kwesịkwara ịma ihe ịma aka ndị na-esote usoro a n'ihi na ire ahịa n'oge a n'oge COVID-19 nwere ike isi ike imezu na-enweghị mmeghachi omume ngwa ngwa, data dịnụ, na ihe ọmụma gosipụtara na isiokwu.
N'ihi ya, ndị ahịa akwụsịla ntụkwasị obi na iguzosi ike n'ihe nye ụdị ndị mepụtara ọdịnaya na-ezighi ezi n'okwu ndị siri ike. Akara nke gi kwesiri ime nyocha kwesiri ekwesighi ime ngwa ngwa ma oburu na ha choro ka uzo ha gha agha.
Oge-Oge Data Dị Mkpa
Nchịkọta ọhụrụ na ozi na-apụta kwa ụbọchị gbasara COVID-19, na-enye ndị azụmaahịa oge niile ohere iji usoro azụmaahịa dị adị. Nke a bụ nsogbu na ụlọ ọrụ ekwesịghị ileghara anya iji nyere aka wulite mmekọrịta na ndị na-ege ha ntị nke nwere ike ịdị ogologo oge mgbe nsonaazụ ahụ belata. Na mmechi, ịre ahịa oge na-eme nke ọma nwere ike ibute nsonaazụ dị ukwuu n'oge ọnọdụ.
Tags: COVID-19ahịa ahịaahia ahiaOreoezigbo oge dataezigbo oge ahịaezigbo oge ahia azumelekọta mmadụ mediaTwitter